सुनी दे "ए गगन रुक जा पवन" भन्छन मेरो मन ! - नेपालबहस
सुनी दे “ए गगन रुक जा पवन” भन्छन मेरो मन !
| १८:४०:३६ मा प्रकाशित
२८ भदौ, काठमाडौं । डि. एस.डिजिटल सिनेमाको ब्यानरमा निमार्ण भएको नेपाली कथानक चलचित्र मदहोशको “ए गगन रुक जा पवन” बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गायिका नित्याशिवा र गायक बाबुल गिरी सो गीतमा आवाज रहेको छ ।
मायालु प्रेमील जोडिको प्रेमलाई चलचित्रमा समावेश गरिएको छ । बाबुल गिरी को संगीत , शंकर अधिकारी घायलको शव्द रहेको छ । विक्रम काकीको छायाँकन , विश्वास भण्डारीको सम्पादन तथा राजु शाहको नृत्य चलचित्रको गीतमा छ ।
दिपेन्द्र कोइराला र प्रीयङका अधिकारी को अभिनय रहेको छ । मदहोश चलचित्र लाई शंकर अधिकारी घायल ले लेखनर निर्देशन गरेका हुन ।
नेटवर्किङमा संलग्न २५ कम्पनी र ५० जना पक्राउ गर्न सिआइबीलाई पत्र २९ मिनेट पहिले